COVID-19 ကြောင့် Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေအသစ်များ• Dutchtown အဓိကလမ်းများ
COVID-19 ထိခိုက်မှုရှိသော Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးအသစ်
အပေါ် Posted နိုဝင်ဘာလ 13th, 2020
စိန့်လူးဝစ္စစီးတီးသည် COVID-19 ၏သက်ရောက်မှုကိုခံရနိုင်သောဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီရန်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောက်ပံ့ငွေရန်ပုံငွေကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထံမှရန်ပုံငွေအတွက် $ 1.25 သန်း ဂရုစိုက်သည် လုပ်ရပ်ကိုဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ်ဖြန့်ဝေမှာဖြစ်တယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်တနင်္လာနေ့မှ စ၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ထောက်ပံ့ငွေလျှောက်ထားနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာများကိုပထမ ဦး ဆုံးလာပြီးပထမဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ရန်ပုံငွေများကုန်ဆုံးသည်အထိထောက်ပံ့ငွေများကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ စိန့်လူးဝစ္စဖွံ့ဖြိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်းကထောက်ပံ့ငွေများကိုစီမံပေးမည်။ သင်၏ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လွှာကိုတနင်္လာနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင်တင်နိုင်သည်။
ရန်ပုံငွေ၏တစ်ဝက်ကိုအခွင့်အလမ်းဇုန်များ၊ ကတိပြုဇုန်များ (သို့) အိမ်နီးချင်းပြန်လည်ရှင်သန်ရေးမဟာဗျူဟာနယ်ပယ်များရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သီးသန့်ထားရှိပါသည်။ ပိုကြီးမားသော Dutchtown ရပ်ကွက်သည်ဤသတ်မှတ်ထားသောဇုန်များအတွင်းတည်ရှိသည် - Dutchtown သင့်လျော်သော၊ Gravois Park နှင့် Pleasant Mount အားလုံးသည်အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်ရှိသည်။ NRSA.
ထို့အပြင်ထောက်ပံ့ငွေ ၂၀၀ ကို restaurants ည့်ဝတ်ပြုခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စားသောက်ဆိုင်များ၊ အရက်ဆိုင်များ၊ ကဖေးများ၊ စားသောက်ခန်းမများ၊ မင်္ဂလာဆောင်စီစဉ်သူများနှင့်ဓာတ်ပုံဆရာများနှင့်အခြားသူများအားခွဲဝေချထားပေးသည်။ စားနပ်ရိက္ခာထရပ်ကားအော်ပရေတာများသည်၎င်းတို့တွင် commissary တစ်ခုသို့မဟုတ် City ရှိအခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာများရှိပါကလျှောက်ထားနိုင်သည်။
စိန့်လူးဝစ်မြို့တော်အခွန်ကောက်ခံမှု (ပိုင်ဆိုင်မှုခွန်၊ ၀ င်ငွေခ၊ ရေခွန်စသည်တို့) အတွက်ပေးချေမှုအားလုံးအပေါ်လက်ရှိ
အဆိုပါအတွက်ထောက်ပံ့ငွေလက်ခံရရှိခဲ့ပါဘူး ထောက်ပံ့ငွေ၏နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည် ဒီနွေရာသီဖြန့်ဝေ
ဖက်ဒရယ်လစာအကာအကွယ်ပေးရေးအစီအစဉ် (PPP)၊ စီးပွားရေးထိခိုက်မှုဘေးအန္တရာယ်ချေးငွေ (EIDL) သို့မဟုတ်အခြားဖယ်ဒရယ်ကယ်ဆယ်ရေးအကျိုးခံစားခွင့်များမှရန်ပုံငွေများဖြင့်ပြီးသားကုန်ကျစရိတ်များကိုဖုံးရန်ရန်ပုံငွေများကိုအသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ။
စိန့်လူးဝစ္စ ၀ န်ထမ်းများ၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသောတာ ၀ န်ရှိသူများသို့မဟုတ် ၄ င်းတို့၏ဆွေမျိုးမိသားစုများမှအကျိုးစီးပွားပconflictsိပက္ခမဖြစ်စေပါ
စာရင်းကိုင်သို့မဟုတ် CPA ကုမ္ပဏီတွေ
ဆရာဝန်များ၊ သွားဆရာဝန်များ၊ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များ၊ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်များ၊
ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာသို့မဟုတ်ရေတိုငှားရမ်းခြင်း
သင်၏ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားသောအခါသင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်နံပါတ်ယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ လိုင်စင်သည် ၂၀၂၀၊ ဇွန် ၁ ရက်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၃၁ ရက်အထိသက်တမ်းရှိရမည်။ ယခင်နှစ်လိုင်စင်နံပါတ်များကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ခေါ်ပါ (314) 622-4528 ဒါမှမဟုတ်သွားရောက်ကြည့်ရှု လိုင်စင်ကောက်ခံသူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက် သင်၏စီးပွားရေးလိုင်စင်အခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်။
သင်၏ဝင်ငွေခွန်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခွန်များကိုလက်ရှိအပြည့်အဝပေးဆောင်ကြောင်းအတည်ပြုရန်အခွန်ကောက်ခံသူအားဆက်သွယ်ပါ။ ခေါ်ပါ (314) 622-3291 သင်၏ဝင်ငွေခွန်အခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ခေါ်ရန် (314) 622-4111 သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအခွန်အတည်ပြုပေးဖို့အတည်ပြုရန်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ရှာနိုင်သည် အခွန်ဘဏ္websiteာရေး၏က်ဘ်ဆိုက်။ Collector နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့်သင်၏လျှောက်လွှာကိုငြင်းပယ်ပါကလိုအပ်သောဖိုင်များနှင့်ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်သင်ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည်။
2019 ဖက်ဒရယ် IRS ကို W-3 Form ကို - လုပ်ခနှင့်အခွန်ရှင်းတမ်း
၂၀၂၀ အတွက်ပုံစံ ၉၄၁ - အလုပ်ရှင်၏လပတ်ဖက်ဒရယ်အခွန်ရှင်းတမ်း (၆/၃၀/၂၀၂၀ သို့မဟုတ် ၉/၃၀/၂၀၂၀ အဆုံးသတ်)
စိန့်လူးဝစ္စအခွန်အခပုံစံ W-10 - လပတ်အမြတ်ခွန်အခွန် (၃/၃၁/၂၀၂၀၊ ၂၀၁၀၊
သင်၏ရထိုက်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုစုဆောင်းပြီးပါကသင်၏လျှောက်လွှာကိုနိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်တနင်္လာနေ့နံနက် ၁၀ နာရီ မှစတင်၍ တင်နိုင်ပါသည်။
အောက်မှာ Filed Covid-19. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား, Covid-19, DT2နှင့် ဒိန်းမတ်. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် နိုဝင်ဘာလ 13th, 2020 .
DT2 • Downtown Dutchtown Covid-19 COVID-19 ထိခိုက်မှုရှိသော Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးအသစ်
Dutchtown Main Streets တွင်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ